यस बुबाका सुपर हीरोहरू आफ्ना बच्चाहरूको चित्रबाट लिए क्रिएटिव अनलाइन
थॉमस रोमेन बुबा हुन् जसले रूपान्तरण गर्न सक्षम छन् तपाइँका बच्चाहरूको चित्रित चित्रहरू उल्लेखनीय पात्रहरूको साथ वास्तविक चित्रणमा। र यद्यपि हामी "स्क्रिब्लिling" भन्छौं, घरको सानोभन्दा सानो विचारहरू केवल शानदार हुन्छन् भन्ने सत्यता।
वयस्कहरूले कान्छोलाई सिकाउने, जस्तो कि यो महान खगोलविद् संग भयो र त्यो विशेष कम्बल। रोमेन जस्तै केहि र उनका छोरा र ती पात्रहरू यति हडताल गर्दछन् कि ऊ यति सानो उमेरको बच्चाको मन र चतुरता उत्पादन गर्न सक्षम छ।
हामी ती कल गर्न सक्छौं अवधारणा र विचारहरूको रूपमा लिखित रेखाचित्र बुबाले हातमा एक पेन्सिल लिन र यसलाई अधिक वयस्क रूप दिन सुरू गर्न र जसमा हामी ती सुपरहीरोहरूसँग प्रयोग गर्दैछौं; हामी फेरि श्रद्धांजलि गर्न एक लिंक छोड्न यस लि of्गको एक आमा बुबा लाई.
बुबाले स indicates्केत गरे जस्तै, चित्र को लागी यसको कठिनाई छ र यसलाई राम्रो टेक्निकल स्तर हुन अभ्यास गर्न वर्षौं लाग्छ। हामी परिप्रेक्ष्य, संरचना, प्रकाश र अन्य धेरै पक्षहरू बारे कुरा गर्न सक्दछौं जुन चित्रकलामा पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनको लागि मास्टर्ड हुनु पर्छ।
त्यहाँ जहिले पनि चालहरू हुन्छन् आफ्ना बच्चाहरूको विचारहरू लिनुहोस् र तिनीहरूलाई सुपरहीरोमा बदल्नुहोस्, तर यसले सँधै मेहनत र अलिक सीप र प्रतिभा लिन्छ।
उनले दावी गरे जस्तै त्यहाँ केहि नियमहरू छन्। ती थिमहरू प्रस्ताव गर्नेहरू हुन् उनीहरूसँग लामो समय सम्म प्रेरणा हुँदैन। रंग पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ र तपाइँको ती स्केचहरू रंग्नु पर्छ। यो तपाइँको कामको एक हिस्सा हो। बुबाले झैं उनी सधैं निर्णय गर्ने छ कि कुन रेखाचित्रमा उसले चित्रको ठूलो चरणको साथ रूपान्तरण गर्नेछ।
हामी तपाईंलाई साथमा छोड्दछौं आफ्नो इंस्टाग्राम लागि कि तपाईं यो बुबाको यात्रा र रेखाचित्र अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको बच्चाहरूको सबै प्रकारको एनिमेटेड पात्रहरूमा परिवर्तन भयो।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » जब एक बुबाले आफ्ना बच्चाहरूको स्क्रिबल चित्रहरू चित्रणमा रूपान्तरण गर्दछ
कल्पित दोस्रो दृष्टान्तमा, र यशैया 45 6-- 7- about को बारेमा सोच्न एक व्यक्तिले महसुस गर्न सक्दछ कि एक बच्चा अझै (सोही) सम्मिलित छैन "भगवान" को वास्तविक प्रकृति महसुस गर्न बढी सक्षम छ।
नेस्टर क्यानो भन्यो
हो, तपाईको बच्चाको चित्रण को वयस्क व्याख्या धेरै राम्रो छ। पक्कै पनि जादुई संसार भित्र एक अधिक "यथार्थवादी" संस्करण। जे होस्, म मूलसँग टाँसिन्छु, यस्तो देखिन्छ कि उनीहरूले व्याख्याको अधिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्छन्। दुबै चित्र कोर्न जारी राख्न, कुन अचम्मको छ! अभिवादन।
Néstor Cano लाई जवाफ दिनुहोस्
हामीले हेर्नुपर्दछ कि उनीहरू कसरी बूढो हुन्छन्। उनीहरू निश्चित रूपले बुबालाई पास गर्छन्!